ကုန်သွယ်ရေးမှအကောင်းဆုံးနာရီ, ရက်, လ, - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်ကုန်သွယ်ရေးမှအကောင်းဆုံးနာရီ, ရက်, လ,
ဒါဟာ Forex တစ်နာရီဝန်းကျင်ကုန်သွယ်နိုင်စျေးကွက် 24 နာရီ, 5.5 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်, 12 လအတွင်းတစ်နှစ်ကြောင်းကြီးလှ၏။ တနေ့လုံးပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်၏အများဆုံးစျေးကွက်မှမဟုတ်ရင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ငွေဖြစ်လွယ်တတ်၏, သူတို့လိုခငျြသညျ့အခါကကုန်သွယ်ရေးဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကုန်သည်များကိုပေးသည်။ သူတို့ကအလုပ်အပြီးသို့မဟုတ်ပင်ညဥ့်အလယ်၌, သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအတွင်းအဖြစ်မကြာခဏသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်စျေးကွက်ပွင့်လင်းနေသည့် 24-7 ရှိခြင်းအတွက်အားနည်းချက်များရှိသည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကုန်သွယ်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းသည် ၀ မ်းသာပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားလည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်စက်ခြင်း၊ စားခြင်းသို့မဟုတ်အနားယူရန်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရာထူးများကိုတစ်ညလုံးနှင့်တစ်ညလုံးစောင့်ကြည့်။ မရပါ။ လွဲချော်နေသောအခွင့်အလမ်းများသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းခုန်ခြင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အနီးအနား၌မရှိသောအခါတည်ရှိနေသောရာထူးများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ရွေ့လျားနေသည့်အချိန်များအမြဲရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူ့ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Forex တွင်ကျွမ်းကျင်သောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (EA) နှင့်ကုန်သွယ်ရန်အကြံပြုလိုသည်၊ ထို့ကြောင့် 24-7 ကိုကုန်သွယ်ရန်သို့မဟုတ်တားမြစ်ရန်အတွက်၊ ကိုယ်ပိုင်အပေါ် အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်အချိန်နှင့် ဗျူဟာ ယုတ္တိဗေဒ။
တစ်ခုချင်းစီကို session တစ်ခုအတွက်ငွေဖြစ်လွယ်အမြဲရှိပေမယ့်, သူတို့ကတန်းတူဖန်တီးကြသည်မဟုတ်: စျေးနှုန်းအရေးယူတသမတ်တည်းမတည်ငြိမ်သောသည်ကာလနှင့်ကအသံတိတ်သည့်အခါကာလရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ငွေကြေးစွမ်းအားသည်ကုန်သွယ်မှုနေ့၏အချို့သောအချိန်များတွင်အွန်လိုင်းမှပါဝင်သူများ၏လူ ဦး ရေနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုပြသသည်။ 24 နာရီအရှိန်အဟုန်ဖြင့် Forex စျေးကွက်အချိန်ကာလသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကုန်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးပွားစေသည်။
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်နာရီအသံအတိုးအကျယ်နှင့်မတည်ငြိမ်မှုအဆင့်ဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်အခါအချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကို pair တစုံကိုပိုပြီးအများကြီးဝယ်ရောင်းချလျက်ရှိသည်ကိုဆိုလိုနှင့်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုငွေကြေးတစ်စုံအစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာယိကြောင်းဆိုလိုသည်။ အကောင်းဆုံးကိုကုန်သွယ်နာရီအတွင်းအမြင့်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောမတည်ငြိမ်သောအကြောင်းမရှိကြီးမားသော PIP လှုပ်ရှားမှုများ။ ထို့အပြင်န့်မြင့်မားတဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကုန်သွယ်နာရီအတွင်းကျဉ်းဖြစ်လာနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောန့်နိမ့်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကိုဆိုလိုသည်။
ပတ်ပတ်လည် oriented, ကျွန်တော်တို့ကိုတခါပြန်အစည်းအဝေးများ၏စားပွဲတစ်ခုကိုကြည့်ပါစို့ ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် နှင့် EST:
နယူးယောက် 8 မှာဖွင့်လှစ်: 00 မှ5နံနက်: 00 ညနေ EST (EDT)
တိုကျို7မှာဖွင့်လှစ်: 00 မှ4ညနေ: 00 နံနက် EST (EDT)
ဆစ်ဒနီ5မှာဖွင့်လှစ်: 00 မှ2ညနေ: 00 နံနက် EST (EDT)
လန်ဒန်3မှာဖွင့်လှစ်: 00 မှ 12 နံနက်: 00 မွန်းတည် EST (EDT)
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ဇုန်စပ်လျဉ်းအထက်ပါစားပွဲပေါ်မှာကိုသိလိုလျှင်, သင်သည်ဤ website ကိုသွားနိုင်ပါတယ်: http://www.forexmarkethours.com/
အဆိုပါ4အစည်းအဝေးများ (လန်ဒန်, နယူးယောက်, ဆစ်ဒနီ, တိုကျို) ၏, ကုန်သွယ်ရေးဖို့အကောင်းဆုံးသူတွေကိုလန်ဒန် session တစ်ခု (အပြာရောင်စုံ) ဖြစ်ကြပြီး NYC session တစ်ခု (အစိမ်းရောင်ရောင်စုံ) ။
ဥရောပတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ:3Am မွန်းတည့် EST 12 ရန်
ကမ္ဘာကြီးကိုနေ့စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏ 34.1% ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (လန်ဒန်) တွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အခြား 7.5% ပြင်သစ်, ဂျာမနီနှင့်ဒိန်းမတ်တို့၏အနီးအနားမှာအချိန်ဇုန်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကြောင့်ဥရောပ session ကိုလျစ်လျူရှုမဖြစ်သင့်ကြောင်းတဦးတည်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်ကြောင်းပေးထား ။ စျေးကွက်ပါဝင်သူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကလန်ဒန်ကုန်သွယ်ငွေကြေးများအတွက်ကမ္ဘာ့အများဆုံးတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထိုသို့နှစ်ဦးစလုံးဟာအာရှနှင့်အမေရိကန်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ များအတွက်ပြဿနာ US ကုန်သည်သူတို့2ညနေ EST မှဖြစ်ကြောင်းကို 12 ထံမှပြေးတဲ့ဥရောပ session ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ရန်အလွန်အစောပိုင်း (သို့မဟုတ်အလွန်နှောင်းပိုင်းတွင်တက်နေပါ) တက်ရရန်ရှိသည်အံ့သောငှါဖြစ်၏။ ၏သင်တန်းဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးဥရောပကုန်သည်များအတွက်စံပြဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းမိမိအညနပေိုငျး (3 စဉ်အတွင်းဥရောပ session ကိုရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်သူအာရှ Trader ဘို့လည်းမဆိုးဖြစ်ပါသည်: 00 PM Midnight, ဟောင်ကောင်အချိန်) ဖြစ်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံတွေဆီကနေကုန်သည်များကသူတို့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းငွေကြေးအသုံးပြုနိုင်သည်အဖြစ်ယူရို, ဗြိတိသျှပေါင်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်ဖရန့်နှင့်တူငွေကြေးဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းအများဆုံးတက်ကြွစွာဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ: 8 Am ရန်5pm တွင် EST
ကမ္ဘာကြီးကိုနေ့စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်၏ 16.6% အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (NYC) တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, နှင့်ကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အများစုက Wall Street အားဖြင့်ထွက်ထားကြသည်သောအရာကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်နံပါတ်များကိုလိုက်နာဟန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသိမြင်ဖို့ထိုနည်းတူလွယ်ကူသောကြောင်းကိုပေးထား session ကိုအလွန်အမင်းအရေးကြီးသည်။ အများစုကသူတို့တစ်နေ့တာအတွင်းအလုပ်သွားဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများကိုဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ ဥရောပတိုက်သား, သို့သော်, ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးကုန်သွယ်မှုနှောင်းပိုင်းတွင်တက်နေရတဲ့ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, နှင့်အာရှသားအိပ်ရာအတွက်ပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြသည်။
အကောင်းဆုံးစျေးကွက်အစည်းအဝေးနှစ်ခု မှလွဲ၍ စျေးကွက်အစည်းအဝေးနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်သောအခါကုန်သွယ်ရေးအတွက်“ ပူပြင်းသည့်ဇုန်” နှစ်ခုရှိသည် (session overlap) ။ ဤသင်ခန်းစာသည်ထပ်တူကျမှုသည်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်လွယ်မှုအချိန်ကာလကိုကိုယ်စားပြုပြီးနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပူပြင်းတဲ့ဇုန် #1: အဆိုပါအမေရိကန်ဥရောပထပ် (8: မွန်းတည့် EST ရန် 00 Am)
ဥရောပကုန်သည်များနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြသောအခါကုန်သွယ်များအတွက်အများဆုံးပေါက်ကွဲအချိန်ဖြစ်ပါသည် US4နာရီအတွင်းကုန်သည်များသည်အစည်းအဝေးများ (8 am မှမွန်းတည့်ချိန် EST) ကြားတွင်ထပ်နေသည်။ ယခုအချိန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အတက်ကြွဆုံးကုန်သွယ်ရေးစင်တာနှစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်သည့်အချိန်ဖြစ်သည် US session ဖွင့်လှစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သော်လည်းအလွန်တက်ကြွသောပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောငွေကြေးကုန်သည်များက“ ပူပြင်းသည့်ဇုန်” ဟုခေါ်ကြသည်။ ဤထပ်တူကျမှုသည်အရေးကြီးသောစီးပွားရေးနံပါတ်များထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်လည်းတိုက်ဆိုင်နေသည်။ ထပ်တူကျခြင်းနှင့်စီးပွားရေးအရအရေးပါမှုတို့ကြောင့်ဤအချိန်ကာလသည်စျေးကွက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်လွယ်မှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုကာလကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုဂရုစိုက်ပါ။ အရောင်းအ ၀ ယ် EUR / USD နှင့် GBP / USD တို့ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းသည်ဤထပ်တူကျချိန်တွင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်။
ပူပြင်းတဲ့ဇုန် #2: အဆိုပါအာရှ-ဥရောပထပ် (3: 00 ရန်4Am: 00 Am EST)
ညဥ့်အချိန်၌,3နံနက် EST ထံမှအကြောင်းကို4AM EST ငှါ, အာရှနှင့်ဥရောပစျေးကွက်အကြားတစ်ဦး 1 နာရီထပ်နေသည်ကိုလည်းမရှိ။ နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ကြီးကနေအရေးကြီးစီးပွားရေးကိန်းဂဏန်းများသည်လည်းဤအချိန်တွင်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့နေကြသည်။ Unsurprisingly သည် GBP / JPY pair တစုံဤအချိန်တွင်အရှိဆုံးမတည်ငြိမ်သောဖြစ်လာသည်။
ကုန်သွယ်မှုအနည်းဆုံးတက်ကြွစွာဆ Sidney ၏အတော်လေးဇုန်ဖြစ်ကြပြီး တိုကျို အချိန် 10 တစ်ဦးပေါင်းစပ်5နာရီလမ်းပိုင်းဖြစ်သောအစည်းအဝေးများ: 00 PM3မှ EST: 00 AM EST ။ သင်မဟုတ်လျှင် ဉီးခေါင်းရေ ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းကြောင်းကိုသင်၏မျှော်လင့် ဉီးခေါင်းရေ စနစ်ကနိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်, တကချိုးယူနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်အစဉ်အဆက်ဤအချိန်ကာလအတွင်းတိုးတက်အလွန်ပါးလွှာ (အတော်လေးစကားပြော) နှင့်အနည်းငယ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပကုန်သည်အများစုကပြီးသားအိပ်ရာသွားပြီနှင့်ကြပါပြီ US ကုန်သည်များအိမ်မှာသူတို့ရဲ့မိသားစုများပြီသို့မဟုတ်အိပ်ရာမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ဝင်ကြပြီ။ သင့်ရဲ့နိုးနှင့်ပြီဆိုပါက အခမဲ့ အချိန်ကဥရောပ session ရဲ့အဖွင့်အဘို့ပြင်ဆင်ရကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေး Sessions မြင်ယောင်ရန်အေးမြညွှန်းကိန်း
Forex အစိမ်းရောင် = တိုကျို ခရမ်းရောင် = လန်ဒန်အပြာရောင် = NYC
မှတ်ချက်: သင်ကညွှန်ပြရပါလိမ့်မယ် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် သင့်ရဲ့များ၏ offset ပှဲစား ဒါအတွက် ညွှန်ပြချက် စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်။ မင်းမသိဘူးဆိုရင် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ထေ, သင်အောက်ပါဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး run နိုင်ပါတယ် ညွှန်ပြချက် သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်:
Forex ကျွန်တော်တို့ကိုတနင်္ဂနွေအပါအဝင်တစ်ပါတ် 5.5 ရက်ပေါင်းကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုပေမယ့်နေ့တိုင်းတန်းတူကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အခြားသူများကိုလျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်ရှိပါတယ်စဉ်တချို့ကရက်, အသံအတိုးအကျယ်နှင့် PIP အကွာအဝေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကုန်သွယ်ရေးပိုမိုနှစ်လိုဖွယ်ရှိပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်၏ရက်ပေါင်းနှင့် ပတ်သက်. လက်မ၏အုပျခြုပျအလယ်မှာရက်ပေါင်း (အင်္ဂါနေ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့) တွင်အများဆုံးအရေးယူခံယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ရုံသုံးရက်တစ်ပါတ်ကုန်သွယ်မှုချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အဲဒီဟာအကောင်းဆုံးရက်ပေါင်းပါလိမ့်မယ်။
တနင်္ဂနွေ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပျော်ရွှင်နေတုန်းပဲ၊ ဒီတော့စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာအရေးပါတဲ့သတင်းကြေငြာချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာအများကြီးလှုပ်ရှားမှုမမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်တွေ့ဘူးသည် လမ်းကြောင်းသစ် ဆက်လက်သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်သောကြာနေ့ရဲ့အဆုံးမှာဖွစျခဲ့ပွီးအရာပေါ်မူတည်ပြီးတနင်္ဂနွေဖြစ်ပျက်။
တနင်္လာနေ့ - တနင်္ဂနွေနေ့ မှစ၍ ကုန်သွယ်မှုများစတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်းတနင်္လာနေ့သည်သုံးရက်တာကာလထက်ပိုက်လိုင်းပမာဏနည်းပါးနေသေးသည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းအထိဖြစ်ပြီးကုန်သည်များသည်စီးပွားရေးသတင်းနှင့်နံပါတ်များကိုသီတင်းပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာရန်စောင့်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ငါများသောအားဖြင့်တနင်္လာနေ့ကိုကုန်သွယ်ရေးအမြတ်အစွန်းအရမ်းကောင်းတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးစတင်တာကိုလက်လွတ်မခံချင်ဘူး။ သို့သော်အဓိကဆန့်ကျင်မှန်ကန်သောရွေ့လျားထွက်သည် လမ်းကြောင်းသစ် တနင်္လာနေ့အကြာတွင်အင်္ဂါနေ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြင့်လှည့ ်. ရကြောင်း။ ဤရွေ့ကားမှားယွင်းသောအရောင်းအဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
သောကြာနေ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုန်သွယ်မှုဟာ 12: 00 pm EST မတိုင်ခင်အထိအလုပ်များနေပြီး၊ 5: 00 pm EST မတိုင်ခင်အထိလှုပ်ရှားမှုမှာအဆင်သင့်ရှိနေလို့ပဲ။ သောကြာနေ့၏ပထမတစ်ဝက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများရှိနေသေးသည်။ သို့သော်သတိထားသင့်သည်မှာဤအချက်သည်ပင်မမှဆုတ်ခွာသည့်နေ့ဖြစ်နိုင်သည် လမ်းကြောင်းသစ်။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုအလွန်တိုးမြှင့်ပြန့်နှံ့စေလမ်းစက်စက်ကျနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, အထူးသဖြင့်အစောင့်အပေါ်သောကြာနေ့၏ဒုတိယတစ်ဝက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
non-လယ်ယာလုပ်ခလစာ - လစဉ်လတိုင်း၏ပထမဆုံးသောကြာနေ့ကို 8: 30 AM EST တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရန်အလွန်အမင်းမတည်ငြိမ်သောအချိန်ဖြစ်နိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲသုတ်သင်မှုများသည်ပွင့်လင်းသောရာထူးများစွာကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဗိုလ်မှူးသတင်းများပွဲများ - ဗဟိုဘဏ်ဥက္က,္ဌ၏မိန့်ခွန်းများ၊ ဒီခေတ်မှာမတည်ငြိမ်သေးဘူး၊
အားလပ်ရက် (အထူးသဖြင့်ဇူလိုင်လ 4၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ခရစ်စမတ်ကဲ့သို့သောအားလပ်ရက်ကြီးများ) - ငွေကြေးကုန်သည်ကြီးများအားလုံးအားလပ်ရက်တွင်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်စျေးကွက်မတည်မြဲနိုင်ပါ။ ဤကာလအတွင်းယေဘုယျအားဖြင့်ဘေးတိုက်ရွေ့လျားသည်။
မြေတပြင်လုံးတစ်နှစ်နွေရာသီ၏သုံးကြောက်မက်ဘွယ်သောလ, ဆောင်းဦးရာသီလေးကအကောင်းဆုံးလ, လေးလျောက်ပတ်သောလများနှင့်အတူစတင်သုံးပုံနှစ်ပုံ၌ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်
ကိုယျတျောကိုသုံးအဆိုးဆုံးလ (နွေရာသီ): ဇွန်, ဇူလိုင်, အထူးသဖြင့်သြဂုတ်လ။
လေးပါးအကောင်းဆုံးလ (ဆောင်းဦးရာသီ): စက်တင်ဘာ, အောက်တိုဘာ, နိုဝင်ဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာလ။
ငါးကောင်းသောလ (ဆောင်းရာသီ-နွေဦး): ဇန်နဝါရီ, ဖေဖော်ဝါရီ, မတ်, ဧပြီ, မေလ,
ဒီ Divide သည်အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဆိုတာဘာလဲ
မဆိုအားလပ်ရက်ကာလကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတက်ခြောက်သွေ့ကိုယ်စားပြုတယ်, ဤအားလပ်ရက်အောက်ပါလတစ်မိုးခေါင်ပြီးနောက်မိုဃ်းရေနှင့်တူကုန်သွယ်ဖို့လန်းဆန်းပြန်လာ, ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အဆိုပါ Big မိုးခေါင်: ဇွန်လ, ဇူလိုင်လပြီးတော့သြဂုတ်လနွေရာသီအားလပ်ရက်လ
S & P ကနေသုတေသန data တွေကိုနွေရာသီလအတွင်းဥရောပတိုက်တွင်နိုင်ငံအများအပြားများအတွက်အများဆုံးဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များအတွက်အားနည်းနေပြန်ပေးကြောင်းဖော်ပြသည်။ အစဉ်အလာ '' မေလထဲမှာရောင်းပါနဲ့ကွာသွားပါ '' လန်ဒန်ကုန်သွယ်ကြမ်းပြင်ကိုဖြတ်ပြီးအသုံးပြုသောအဟောင်းကိုအလေးချိန်နေဆဲ S & P Indicator ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်နှင့်အညီ, ကိုယ်ပိုင်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝနှစ်ကပြန်လာပြီးမှအများဆုံးအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းယခုနှစ်၏နောက်ဆုံးလေးလတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့နောက်ကွယ်မှသီအိုရီနွေရာသီလများနှေးကွေးစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အရှုံးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ မေလ၌သင်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ရောင်းခြင်း, နွေရာသီကျော်သာအခါ, သင်သည်သင်၏အစုစုကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်အလားအလာပိုကောင်းပြန်အောင်မြင်ရန်သူတို့ကို reinvesting အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဇန်နဝါရီလ 2000 ထံမှဒီဇင်ဘာလ 2009 မှဆယ်တစ်နှစ်ကာလအတွင်း S & P ကို ​​Global Broad Market ကအညွှန်းကိန်းတဆယ်ခြောက်ဥရောပစျေးကွက်၏လစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းအားဖြင့်, S & P သောဤကုန်သွယ်ပြသခဲ့သည် ဗျူဟာ နေဆဲဥရောပတစ်လွှားကောင်းသောရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများအဘို့နှင့်လည်းအမေရိကန်, ဇွန်လ-သြဂုတ်လကာလအတွင်းပျမ်းမျှထွက်အနည်းငယ်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အဆိုပါယခုနှစ်နောက်ဆုံးလေးလတာအတွင်းကျသွားသည့်အကျိုးအမြတ်များအမြောက်အများ (စက်တင်ဘာ-ဇန်နဝါရီ) နဲ့, 3% ဖြစ်ဇန်နဝါရီ-မေလကာလအတွင်းပျမ်းမျှထွက်ရှေ့။ နောက်ဆုံးလေးလပင်ညံ့ဖျင်းဖျော်ဖြေနွေရာသီကြုံတွေ့ရပြီးနောက်ပြန်တိုးတက်လာဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသေးကြောင်းအဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝနှစ်ကပြန်လာပြီးမှပံ့ပိုးမှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
သြဂုတ်လ 2011 500% ကျဆင်း, S & P 10 များအတွက်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 2010 4.5% ကျသွားလည်း S & P များအတွက်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 2008 ကြောင့်နှာခေါင်း-ရေငုပ်မတိုင်မီ 1% မြင့်တက်, S & P ဘို့ပရိယာယ်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နွေရာသီ, အထူးသဖြင့်သြဂုတ်လအဖြစ်ကောင်းစွာအားလပ်ရက်အပေါ်အားလပ်ရက်နှင့်မြောက်အမေရိကအပေါ်ဥရောပအများအပြားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကုန်သည်များနှင့်အတူကုန်သွယ်ဖို့အဆိုးဆုံးကာလဖြစ်ပါသည်။ ဒါကလျော့နည်းကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းတျအပွောငျးအလဲစေပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဗျူဟာ အများအပြားစက်တင်ဘာလန်းကျင်ကြွလာသောအခါရိုးရိုးအားလပ်ရက်နှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကုန်သွယ်အပေါ်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
သငျသညျနွေရာသီကာလအတွင်းကုန်သွယ်မှုရှိပါကဘေးတိုက်အရေးယူဘို့အဆင်သင့်ရှိပါစေ။ ထို့အပြင်လို့ခေါ်တဲ့အကွာအဝေး based စနစ် (ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းသစ် ) မဟာဗျူဟာနွမ်း။ ၎င်း၏အကွာအဝေးရဲ့ထိပ်မှာငွေကြေးရောင်းယင်း၏အောက်ခြေမှာဝယ်သုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် mini ကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းကုန်သွယ်မှုငယ်များအချိန်ဘောင် (M5 သို့မဟုတ် M15) သို့ချဲ့။
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်ဘေးတိုက် လမ်းကြောင်းသစ် အားလပ်ချိန်နှင့်ညာပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် အလုပ်သမားနေ့ US မှာအားလပ်ရက်လူတိုင်းသောနောက်တရားမဝင်ကျော်တစ်ချိုးနဲ့နွေရာသီကြာပါသည်။
post-နွေရာသီလ (ဒီဇင်ဘာလရန်စက်တင်ဘာလ) နွေရာသီမိုးခေါင် မှစ. စျေးကွက်များပြန်ခုန်ထွက်သကဲ့သို့, အကောင်းဆုံးထရေးဒင်းကာလ Up ကိုဝေငှ
ဤအလကြာနွေရာသီအားလပ်ရက်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ပြီးနောက်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမြင့်တက်ကိုယ်စားပြုနေသောကြောင့်ကုန်သွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးလအတွင်းစက်တင်ဘာလကနေဒီဇင်ဘာလရန်, ဖွင့်နွေရာသီမှာအပြီးပေါ်ပေါက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။ တဦးတည်းကုန်သွယ့်လအနည်းငယ်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်လျှင်ဤကပါလိမ့်မယ်။
နှေးကွေးသောကုန်သွယ်မှုအတွက် "ဆောင်းရာသီလ" ရှိပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလဒုတိယဝက်တွင်သြဂုတ်လတွင်ပမာဏနည်းသည်။ ခရစ်စမတ်ပတ်ပတ်လည်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်များကAugustဂုတ်လကဲ့သို့နှေးကွေးပြီးဇန်နဝါရီလအစတွင်လည်းမထူးဆန်းပါ။
ရုံဒီဇင်ဘာလတွင်ဒုတိယအားလပ်ရက်ကာလအပြီးဇန်နဝါရီလကနေမေလ, 2011 မှကြာကြောင်းကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရွေးရှိသေး၏။ ဒါဟာဆောင်းဦးရာသီအတွက်တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးကုန်သွယ်ကာလအဖြစ်အစွမ်းထက်မကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သူကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အလမ်းများစွာကိုလအတွင်းပေးပါဘူး။